HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Nahuatl (Afovoany) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zandé Zoloa Éwé
“Aoka ho masina ianareo.”—LEV. 11:45.
Nahoana ny mpanompon’i Jehovah rehetra no mandray lesona avy amin’ny nanadiovana an’i Arona sy ny zanany lahy?
Inona no ifandraisan’ny fankatoavana sy ny fahamasinana?
Ahoana no tokony ho fiheverantsika ny lalàn’i Jehovah momba ny ra?
1. Nahoana no manampy antsika ny bokin’ny Levitikosy?
NY LEVITIKOSY no boky tena miresaka momba ny fahamasinana, ao amin’ny Baiboly. Tokony hihevitra azy io ho sarobidy sy hiezaka hahazo izay voalaza ao isika, satria hanampy antsika ho masina izany. Tsy maintsy masina mantsy ny tena mpanompon’i Jehovah rehetra.
2. Inona avy no mampiavaka ny Levitikosy?
2 Mahasoa mba hampianarana “ny Soratra Masina iray manontolo.” (2 Tim. 3:16) Anisan’izany ny Levitikosy izay nosoratan’i Mosesy mpaminany. Hita ao impolo eo ho eo isaky ny toko ny anarana hoe Jehovah. Hitandrina kokoa isika mba tsy hanao zavatra mety hanala baraka ny anaran’i Jehovah, raha azontsika ny voalazan’io boky io. (Lev. 22:32) Miverina imbetsaka ao ny hoe “Izaho no Jehovah.” Mampahatsiahy antsika izany fa mila mankatò an’Andriamanitra isika. Nomeny mba hanampiana antsika hanao fanompoana masina ny Levitikosy. Ho hita ato sy ao amin’ny lahatsoratra manaraka ny lesona sarobidy ao.
TOKONY HO MASINA ISIKA
3, 4. Mifanitsy amin’ny inona ny nanasana an’i Arona sy ny zanany? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
3 Vakio ny Levitikosy 8:5, 6. Nifidy an’i Arona mba ho mpisoronabe ho an’ny Israelita i Jehovah, ary nataony mpisorona ho azy ireo ny zanany lahy. Mifanitsy amin’i Jesosy Kristy i Arona, ary mifanitsy amin’ireo voahosotra mpanara-dia an’i Jesosy ny zanany lahy. Mifanitsy amin’ny inona kosa ny nanadiovana an’i Arona? Nila nodiovina koa ve i Jesosy? Tsia, satria “tsy misy tsiny” izy sady tsy nanota. (Heb. 7:26; 9:14) Mifanitsy amin’i Jesosy izay madio sy marina anefa i Arona rehefa voadio. Inona àry no mifanitsy amin’ny nanasana an’i Arona sy ny zanany?
4 Mifanitsy amin’ny fanadiovana an’ireo voafidy ho mpisorona any an-danitra ny nanasana ny zanak’i Arona. Misy ifandraisany amin’izany koa ve ny batisan’ireo voahosotra ireo? Tsia, satria tsy manala ny fahotana ny batisa. Midika kosa izy io fa nanokan-tena tsy misy fepetra ho an’i Jehovah Andriamanitra ny olona iray. Diovina “amin’ny alalan’ny teny” ireo voahosotra, ka tsy maintsy mampihatra ny fampianaran’i Kristy amin’ny fony manontolo. (Efes. 5:25-27) Lasa masina sy madio izy ireo vokatr’izany. Ary ahoana ny “ondry hafa”?—Jaona 10:16.
5. Nahoana no azo lazaina fa diovina amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra ny ondry hafa?
5 Tsy mifanitsy amin’ny “vahoaka be” anisan’ny ondry hafa ny zanak’i Arona. (Apok. 7:9) Hamasinina sy diovina amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra koa anefa ireo olona vita batisa ireo, izay manantena hiaina eto an-tany. Rehefa mamaky Baiboly mantsy izy ireo, dia hitany fa zava-dehibe sy manan-kery ny soron’i Jesosy. Mino an’izany izy ireo ka ‘manao fanompoana masina andro aman’alina.’ (Apok. 7:13-15) Mitohy ny fanadiovana an’ireo voahosotra sy ondry hafa, ka ‘tsara fitondran-tena foana’ izy ireo. (1 Pet. 2:12) Azo antoka fa faly i Jehovah mahita hoe madio sy miray saina ny voahosotra sy ny ondry hafa, izay mihaino sy manara-dia foana an’i Jesosy mpiandry azy ireo.
6. Nahoana isika no mila mandini-tena matetika?
6 Inona no ianarantsika avy amin’ilay didy hoe tokony hadio ny mpisorona? Matetika ny olona ampianarintsika Baiboly no mahamarika fa madio ny toerana ivavahantsika ary madio sy milamina ny akanjontsika. Hitantsika avy amin’ny fahadiovan’ireo mpisorona anefa fa tsy maintsy “madio fo” izay rehetra mankany an-tendrombohitr’i Jehovah mba hanompo azy. (Vakio ny Salamo 24:3, 4; Isaia 2:2, 3.) Tokony ho fo sy saina ary vatana madio no anaovantsika fanompoana masina ho an’Andriamanitra. Ilaina àry ny mandini-tena matetika. Mety hila hanao fanovana lehibe ny sasany amintsika aorian’izay mba ho masina. (2 Kor. 13:5) Ahoana, ohatra, raha misy olona vita batisa minia mijery sary vetaveta? Tokony hieritreritra izy hoe: ‘Azo lazaina hoe masina ve aho?’ Mila mangataka fanampiana koa izy mba hialany amin’io fahazarana maharikoriko io.—Jak. 5:14.
HO MASINA ISIKA RAHA MANKATÒ
7. Inona no modely navelan’i Jesosy, mifanaraka amin’izay voalazan’ny Levitikosy 8:22-24?
7 Rehefa napetraka tamin’ny toerany ny mpisorona teo amin’ny Israely, dia nasiana ran’ondrilahy ny ravintsofiny havanana sy ny ankiben-tanany havanana ary ny ankiben-tongony havanana. Izany no natao tamin’i Arona Mpisoronabe sy ny zanany lahy. (Vakio ny Levitikosy 8:22-24.) Hita amin’izany fa hankatò izy ireo ka hanao izay tsara indrindra vitany mba hanatanterahana ny andraikiny. Toy izany koa i Jesosy Mpisoronabe. Mailaka hihaino ny tari-dalan’i Jehovah ny sofiny, nanaovany ny sitrapon’i Jehovah ny tanany, ary tsy niala tamin’ny lalan’ny fahamasinana mihitsy ny tongony. (Jaona 4:31-34) Modely tonga lafatra ho an’ny voahosotra sy ny ondry hafa àry izy.
8. Inona no tsy maintsy ataontsika rehetra?
8 Tsy tokony hivadika mihitsy ny voahosotra sy ny ondry hafa, toa an’i Jesosy mpisoronaben’izy ireo. Tsy maintsy mankatò an’izay lazain’ny Baiboly ny mpanompon’i Jehovah rehetra, mba tsy “hampalahelo ny fanahy masin’Andriamanitra.” (Efes. 4:30) Tsy maintsy ‘ataony mahitsy foana ny lalana halehan’ny tongony.’—Heb. 12:13.
9. Inona no tenin’ny rahalahy telo miara-miasa akaiky amin’ny Filan-kevi-pitantanana, ary nahoana ny tenin’izy ireo no hanampy anao ho masina foana?
9 Diniho ny tenin’ny rahalahy telo manantena hiaina eto an-tany. Efa ela izy ireo no niara-niasa akaiky tamin’ireo anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Hoy ny iray: “Tombontsoa miavaka ny miara-miasa amin’izy ireo. Tsikaritrao ihany anefa rehefa miara-miasa akaiky aminy ianao, fa tsy lavorary izy na dia voahosotry ny fanahy aza. Nataoko tanjona foana ny hankatò an’ireo mitarika, na izany aza.” Hoy koa ny iray: “Nanampy ahy hankatò sy hiara-miasa amin’ireo mitarika ny andinin-teny toy ny 2 Korintianina 10:5, izay miresaka momba ny ‘fankatoavana an’i Kristy.’ Vokatry ny foko izany fankatoavana izany.” Hoy indray ny iray: “Hankatò ny fandaminan’i Jehovah sy izay ampiasainy mba hampandroso ny asany eto an-tany isika, raha tia izay tian’i Jehovah sy mankahala izay halany ary mangataka foana ny tari-dalany sy mampifaly azy.” Nampiaiky an’io rahalahy io ny fankatoavan’i Nathan Knorr, izay lasa anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Tsy nisalasala mantsy i Nathan Knorr nanaiky an’ireo hevitra nolavin’ny olona sasany tao amin’ilay lahatsoratra hoe “Fahaterahan’ilay Firenena”, tao amin’ny Tilikambo Fiambenana tamin’ny 1925. Saintsaino ny tenin’ireo rahalahy ireo fa hanampy anao hankatò izany ka ho masina ianao.
ANKATOAVY TANTERAKA NY LALÀN’ANDRIAMANITRA MOMBA NY RA
10. Nahoana no tena ilaina ny mankatò ny lalàn’Andriamanitra momba ny ra?
10 Vakio ny Levitikosy 17:10. Nandidy ny Israelita i Jehovah hoe tsy azo hanina ny ra, “na ran’inona izany na ran’inona.” Takina amin’ny Kristianina koa ny mifady ra, na ran’olona na ram-biby. (Asa. 15:28, 29) Mampatahotra na dia ny mieritreritra fotsiny aza hoe “hanameloka” antsika i Jehovah ka hanala antsika tsy ho anisan’ny fiangonany. Tia azy isika ka te hankatò. Tapa-kevitra ny hifady ra isika, na dia rehefa tandindomin-doza aza ny aintsika. Tsy hanaiky lembenana isika, na dia hiangavy sy hanery antsika aza ny olona tsy mahalala an’i Jehovah sy tsy te hankatò azy. Efa ampoizina hoe hisy haneso isika, nefa aleontsika mankatò an’Andriamanitra. (Joda 17, 18) Inona no hanampy antsika ho “tapa-kevitra mafy” tsy hihinana ra na hanaiky fampidiran-dra?—Deot. 12:23.
11. Nahoana no azo lazaina fa tsy fombafomba fotsiny ny natao tamin’ny Andro Fandrakofam-pahotana?
11 Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny ra? Diniho ny nampiasan’ny Mpisoronabe ny ram-biby, tamin’ny Andro Fandrakofam-pahotana fanao isan-taona. Nampiasaina tamin’ny zavatra manokana ny ra. Natao handrakofana ny fahotan’izay te hahazo ny famelan’i Jehovah izy io. Nafafy tandrifin’ny saron’ny Vata misy ny fifanekena ny ran’ilay ombilahy sy ny ran’ilay osilahy natao fanatitra. (Lev. 16:14, 15, 19) Afaka namela ny fahotan’ny Israelita àry i Jehovah. Nandidy koa i Jehovah hoe rehefa misy mamono biby hatao sakafo, dia tokony hararaka amin’ny tany ny ran’ilay izy ary hototofana vovoka, satria “ao amin’ny ra ny ain’ny nofo.” (Lev. 17:11-14) Fombafomba tsy misy dikany ve izany rehetra izany? Tsia. Efa nisy didy momba ny ra nomen’i Jehovah an’i Noa sy ny taranany, talohan’izay. (Gen. 9:3-6) Mifanaraka amin’izy io ny fomba nampiasana ny ra tamin’ny Andro Fandrakofam-pahotana sy ilay didy hoe tokony hararaka amin’ny tany ny ra. Noraran’i Jehovah ny hoe mihinana ra mba ho velona. Inona no dikan’izany ho an’ny Kristianina?
12. Ahoana no nampifandraisan’i Paoly ny ra sy ny famelan-keloka?
12 Nohazavain’ny apostoly Paoly tamin’ny Kristianina hebreo fa afaka manadio ny ra. Hoy izy: “Saika ny zava-drehetra no diovina amin’ny ra, araka ny Lalàna. Ary raha tsy misy ra alatsaka dia tsy misy famelan-keloka.” (Heb. 9:22) Marina fa nisy nilana ny sorona biby. Nilaza anefa i Paoly fa nampahatsiahy ny Israelita fotsiny izany hoe mpanota izy ireo, ary nisy zavatra hafa nilaina raha te ho afaka tanteraka tamin’ny ota izy ireo. “Aloky ny zavatra tsara ho avy ny Lalàna fa tsy ny tena izy.” (Heb. 10:1-4) Ahoana àry no ahazoana famelan-keloka?
13. Inona no tsapanao noho i Jesosy nanolotra ny vidim-panavotana ho an’i Jehovah?
13 Vakio ny Efesianina 1:7. “Nanolotra ny tenany” ho an’ny olombelona i Jesosy Kristy, ary misy heviny lalina ho an’ireo rehetra tia azy sy ny Rainy ny nahafatesany ho sorona. (Gal. 2:20) Izay nataon’i Jesosy taorian’ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin’ny maty anefa no tena manafaka antsika amin’ny ota sy ahazoantsika famelan-keloka. Mifanitsy amin’izay natao nandritra ny Andro Fandrakofam-pahotana io zavatra nataony io. Niditra tao amin’ny Masina Indrindra tao amin’ny tranolay na ny tempolin’i Solomona ny mpisoronabe tamin’io, ka natolony an’i Jehovah ny ran’ireo biby natao fanatitra. Toy ny hoe teo anatrehan’i Jehovah mihitsy izy tamin’izay. (Lev. 16:11-15) Toy izany koa no nataon’i Jesosy. Nankeo anatrehan’i Jehovah tany an-danitra izy ary natolony azy ny vidim-panavotana vokatr’ilay ra nalatsany. (Heb. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Tena faly isika hoe voavela ny fahotantsika ary madio ny feon’ny fieritreretantsika, noho isika mino ny ran’i Jesosy.
14, 15. Nahoana no tena ilaina ny mahazo tsara ny lalàn’i Jehovah momba ny ra sy mankatò an’izany?
14 Azonao kokoa ve izao hoe nahoana i Jehovah no tsy mamela antsika hihinana ra, “na ran’inona izany na ran’inona”? (Lev. 17:10) Azonao ve hoe nahoana ny ra no masina aminy? Toy ny aina no fiheverany ny ra. (Gen. 9:4) Ekenao ve fa tokony hitovy amin’ny fiheveran’Andriamanitra ny ra ny fiheverantsika azy io, ary tokony hankatò ny didiny mba hifady ny ra isika? Mila mino ny sorom-panavotan’i Jesosy isika ary manaiky fa tena sarobidy amin’ny Mpamorona ny ra. Izany ihany no ahafahantsika mihavana amin’Andriamanitra.—Kol. 1:19, 20.
15 Mety hila hanapa-kevitra tampoka isika rehetra hoe hanaiky hampidiran-dra sa tsia. Toy izany koa ny fianakaviantsika sy ny namantsika. Rehefa misy olana toy izany, dia ilaina ny manapa-kevitra hoe inona no fitsaboana hatao ary hampiasa zavatra avy amin’ny taharo fototry ny ra sa tsia. Tena ilaina àry ny manao fikarohana sy miomana mialoha amin’izay loza mety hitranga. Ilaina koa ny mivavaka. Hanampy antsika ireo rehetra ireo mba hijoro amin’ny hevitsika sy tsy hanaiky lembenana. Azo antoka fa tsy te hanao zavatra melohin’ny Tenin’i Jehovah isika ka hampalahelo azy. Mampirisika ny olona hanome ra mba hamonjena aina ny dokotera maro sy ny olon-kafa. Mino anefa ny vahoaka masin’i Jehovah fa ny Mpamorona no manana zo hilaza izay fomba mety hampiasana ny ra. Aminy dia masina ny ra, “na ran’inona izany na ran’inona.” Tsy maintsy tapa-kevitra isika fa hankatò ny lalàny momba ny ra. Rehefa manana fitondran-tena masina isika, dia asehontsika amin’i Jehovah fa tena ankasitrahantsika ny ran’i Jesosy, izay mamonjy aina. Ny rany ihany no ahazoantsika famelan-keloka sy fiainana mandrakizay.—Jaona 3:16.
Tapa-kevitra ny hankatò ny lalàn’i Jehovah momba ny ra ve ianao? (Fehintsoratra 14, 15)
NAHOANA I JEHOVAH NO MANDIDY ANTSIKA MBA HO MASINA?
16. Nahoana ny vahoakan’i Jehovah no tsy maintsy masina?
16 Hoy i Jehovah rehefa nanafaka ny Israelita tsy ho andevo tany Ejipta: “Izaho no Jehovah izay nitondra anareo niakatra avy tany Ejipta mba hasehoko aminareo fa Andriamanitra aho. Koa aoka ho masina ianareo, satria masina aho.” (Lev. 11:45) Tokony ho masina ny Israelita satria masina i Jehovah. Tsy maintsy masina koa isika satria Vavolombelon’i Jehovah. Marina tokoa izany rehefa dinihina ny Levitikosy.
17. Ahoana izao no fahitanao ny bokin’ny Levitikosy?
17 Tena nahasoa antsika ny nandinika ny ampahany tamin’ny Levitikosy. Azo inoana fa mankasitraka kokoa an’io boky ao amin’ny Baiboly io ianao izao. Azo antoka koa fa azonao kokoa hoe nahoana isika no tokony ho masina, rehefa saintsaininao ny fanazavana sarobidy sasany ao. Mbola misy lesona sarobidy hafa ve ao amin’io boky io? Inona no mbola azontsika ianarana ao, momba ny fanaovana fanompoana masina ho an’i Jehovah? Hodinihina ao amin’ny lahatsoratra manaraka ireo.
Hizara Hizara Nahoana no Tsy Maintsy Masina Isika?